किसान बढी क्यान्सर बिरामीमा ! – ejhajhalko.com
किसान बढी क्यान्सर बिरामीमा !
१२ माघ २०७४, शुक्रबार ०७:११ 189 पटक हेरिएको
राष्ट्रिय क्यान्सर रजिष्ट्रीको १० वर्षे रिपोर्ट (सन् २००३–१२¬) मा क्यान्सरको उपचार गराउन आएका ५६ हजार १३ नेपालीमध्ये झन्डै ३७ प्रतिशत खेतीकिसानी गर्ने रहेको देखाएको छ । सन् २००३ देखि २०१२ सम्मको १० वर्षको सबै खाले विवरण समेटिएको सो प्रतिवेदन असोज १० मा भरतपुरस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको वार्षिकोत्सवमा सार्वजनिक गरिएको थियो । १० वर्षमा सातवटा अस्पतालमा ५६ हजार १३ नेपाली क्यान्सर उपचार गराउन आएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तीमध्ये कृषि पेसा अंगाल्ने बताउने २० हजार ९ सय ५३ छन् । यो संख्या कुल बिरामीको झन्डै साढे ३७ प्रतिशत हो । उपचार गराउन आएका मध्ये सबैभन्दा थोरै आफूलाई व्यापारी बताउने छन् । जसको संख्या एक हजार ४ सय २९ छ । यो संख्या कुल बिरामीको दुई दशमलब छ प्रतिशत हो । त्यसपछि कार्यालयमा काम गर्ने छन् । जसको संख्या तीन दशमलब सात प्रतिशत छ।